FILAN-KEVITRA AMBONIN’NY MPITSARA : Mpitsara iray voaroaka tamin’ny asany, 17 hafa voasazy
Niatrika fivoriana fanao isan-taona ny teo anivon’ny Filan-kevitra ambonin’ny mpitsara (CSM), ny 28 ka hatramin’ny 30 oktobra lasa teo. 4 novembre 2020
Tamin’io fotoana io ihany koa no nampiakarana filan-kevitry ny fitsipi-pifehezana an’ireo mpitsara miisa 18 izay nanao hadisoana tao anatin’ny asany.
Tafiditra ao anatin’ny fanadiovana ny tontolon’ny Fitsarana ary mba hamerenana ny fahatokisan’ny vahoaka amin’ny Fitsarana ny antom-pisian’ny fanasaziana tahaka izao. Tsy misy ny olona ambony lalàna fa na mpitsara aza dia azo tsaraina rehefa manao fandikan-dalàna, indrindra ao anatin’ny asa izay iandraiketany. Tsy ankitsisy ihany koa ny fampiharana ny sazy fa mitovy lanja amin’izay fandikan-dalàna natao ny fanasaziana azony. Niisa 18 ireo mpitsara niakatra fitsipi-pifehezana.
Samy manana ny vesatra nanenjehana azy izy ireo ary samy nahazo ny anjara saziny ihany koa taorian’ny fivoahan’ny fanapahan-kevitr’ireo mpikambana ao anatin’ny Filan-kevitra ambonin’ny mpitsara. Ny iray tamin’izy ireo avy hatrany dia voaroaka tsy ho mpitsara intsony ary noesorina niaraka tamin’izay ihany koa ny zo ananany amin’ny fisotroan-dronono.
Mpitsara 8 kosa no natsahatra ny fanenjehana azy ka afaka madiodio ka ny telo nahazo fampitandremana eo amin’ny fomba fiasa, mpitsara roa nahena ny karamany, iray nampidinina ny gradiny, izany hoe, raha mpitsara manana ny grady voalohany izy teo aloha izay grady ambony indrindra amin’ny lafiny Fitsarana dia nampidina ho faharoa. Ankoatra izay dia mpitsara telo hafa natsahatra mandritra ny 12 volana amin’ny maha mpitsara azy.
Marihina fa ny iray ampahatelon’ireo mpitsara niakatra fitsipi-pifehezana ireo dia manana grady voalohany avokoa izay azo lazaina fa tsy avahana ny fanasaziana eo anivon’ny tontolon’ny Fitsarana. Vao haingana no nisian’ny tatitra nivoaka mikasika ny trangana kolikoly eny anivon’ny Fitsarana. Ity farany mbola mitana ny lohalaharana hatrany eto Madagasikara. Miezaka manarina sy mamafa an’io endrika ratsy io ireo tompon’andraikitra, ka antony isian’ny fanasaziana faran’izay henjana tahaka izao. Isan-taona, raha ny fantatra, dia tsy maintsy hisy hatrany ny fanadiovana eo amin’ny sehatry ny Fitsarana. Izay manao hadisoana amin’ny asany indrindra fa ireo izay tratra manao kolikoly dia tsy maintsy saziana avy hatrany.